ကလေးက Super Glue ဖွင့််မိပြီး ပါးစပ်ထဲထည့်မိသွားတယ်ဆိုတာမျိုးကြုံခဲ့မိရင်….(မိခင်တိုင်းအတွက် မှတ်သားဖွယ်) – သတင်းစုံ
ကလေးက Super Glue ဖွင့််မိပြီး ပါးစပ်ထဲထည့်မိသွားတယ်ဆိုတာမျိုးကြုံခဲ့မိရင်….(မိခင်တိုင်းအတွက် မှတ်သားဖွယ်)
အစ်မရေ … အထူးအဆန်း Case တခု ရောက်လာပြန်ပြီ။ ဟေ … ဘာများလဲ။
ကလေးက တနှစ်ကျော်။ လမ်းလျှောက်ခါစ။ အမေက ထိန်းနေရာက ခဏထပြီး ရေသောက်တာ။ အဲဒီအချိန် ဘေးနားက ဘီဒိုအံဆွဲထဲက Super glue ကို ဖွင့်ပြီး ပါးစပ်ထဲထည့်လို့။ ချက်ချင်းဆွဲလိုက်ပေမယ့် မမီလိုက်ဘူးတဲ့ ။ ခု ကြည့်လိုက်တော့ … အာခေါင်မှာရယ် လျှာပေါ်ရယ် ခြောက်ပြီးကပ်နေတယ်။
အင်း … ဖြစ်ရမယ်။ ကဲ ကဲ … ခုချက်ချင်း စာရှာဖတ်ကြဦး။ ဘယ်လို Toxicity (အဆိပ်သင့်ခြင်း) ရနိုင်သလဲ။ ဘယ်လို ကုသမှုပေးရမလဲ ဆိုတာ။
Super Glue မှာ Cyanoacrylates ဆိုတဲ့ ဓာတုပစ္စည်း အဓိက ပါဝင်ပါတယ်။ ကပ်အားအလွန်ကောင်းတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းမို့ မတော်တဆ သူနဲ့ထိမိတဲ့အခါ အရေပြားအချင်းချင်း ပူးကပ်သွားတာ… ဦးရေပြားနဲ့ဆံပင်မှာ ထွေးကပ်သွားတာ … ပါးစပ်ထဲဝင်သွားတဲ့အခါ …
မျက်စိထဲဝင်ပြီး မျက်လုံးပိတ်သွားတာ … မျက်စိမျက်ကြည်လွှာထိခိုက်ပြီး အမြင်အာရုံကွယ်သွားတာ … တွေထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အမြန်ခြောက်သွားတတ်တဲ့ သဘာဝကြောင့် ပါးစပ်ထဲဝင်သွားခဲ့ရင် မြိုချမိတဲ့ထိဖြစ်ခဲပါတယ်။ ပါးစောင် အာခေါင် လျှာပေါ်မှာ ခြောက်ပြီး ကပ်သွားနိုင်ပါတယ်။
”First aid measure” Super Glue နဲ့ ကပ်မိရင် အရေးပေါ် ဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲ။
မပြာပါနဲ့။ကပ်နေတဲ့အရေပြားကို ဇွတ်ဆွဲမခွာပါနဲ့။ အရေပြား ထိခိုက်ပွန်းပဲ့နိုင်ပါတယ်။
ကပ်နေတဲ့နေရာကို ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ (Vegetable oil) ရွှဲရွှဲလူးပေးထားပါ။ အဲဒါမရှိရင် ဆပ်ပြာနဲ့ရေနွေးနွေးနဲ့ စိမ်ထားပါ။
အရေပြားကို ရှေ့နောက်အသာအယာ ပွတ်ဆွဲလှိမ့်ပြီး အနားတွေကစပြီး ကပ်နေတဲ့ကော်ကို ငြင်ငြင်သာသာခွာကြည့်ပါ။
တခါနဲ့မရရင် ဆီပြန်လူးပြီး ထပ်ခါထပ်ခါ ကြိုးစားကြည့်ပါ။ ချောမွတ်တဲ့ပစ္စည်းတခုခု (ဥပမာ ခဲတံ, ဘီး) ကို ကပ်နေတဲ့ကြားကထားပြီး အသာဆွဲဟကြည့်ပါ။ ခွာလို့ရသွားပြီးရင် ခြောက်သွေ့အက်ကွဲတာကာကွယ်ဖို့ အစိုဓာတ်ထိန်းတဲ့ ခရင် တခုခုလိမ်းပေးပါ။
မပြာပါနဲ့။မျက်ခွံကို ဇွတ်ဆွဲမခွာပါနဲ့။ ဒဏ်ရာရသွားနိုင်ပါတယ်။ကော်ဝင်သွားတဲ့မျက်စိကို ရေနွေးနွေးနဲ့ ချက်ချင်းဆေးပါ။
ရေဆွတ်ထားတဲ့အဝတ် သို့ ပတ်တီးနဲ့ အသာအုပ်ထားပြီး မျက်စိဆရာဝန်ထံ သွားပါ။
တကယ်လို့ ပြစရာမျက်စိဆရာဝန်မရှိရင်လည်း ပြာပြီး လုပ်မိလုပ်ရာမလုပ်ပါနဲ့။ များသောအားဖြင့် ၁-၄ ရက်အတွင်း အလိုလို ပြန်ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်။
Vegetable oil ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ သို့ Body oil ကိုယ်လိမ်းဆီ တမျိုးမျိုး ရွှဲရွှဲလူးပေးပါ။ တရက် နှစ်ရက်နေရင် အလိုလိုကွာကျသွားပါမယ်။ သိပ်လုံးထွေးနေရင် ဆံပင်ကို အသာလေး ရိတ်ပစ်လို့ရပါတယ်။
ပါးစပ်ထဲကပ်နေတဲ့ကော်ကို ပါးစပ်ထဲကသွားရေနဲ့ပဲ စိုအောင်လုပ်ပြီး လျှာကပွတ်တွန်းပေးပါ။ (ကလေးငယ်တွေကတော့ မလုပ်တတ်လောက်ဘူး။)
တရက်နှစ်ရက်နေလို့ ကွာလာတဲ့အခါ မြိုမချမိဖို့ သတိထားရပါမယ်။ (ဒါလည်း ကလေးငယ်တွေအဖို့ ခက်ခဲမယ်။)
Super glue မျက်စိထဲဝင်ပြီး မျက်ကြည်လွှာပေါက်ပြီး မျက်စိကွယ်သွားတဲ့ကလေး …
ပါးစပ်အဝကပ်သွားပြီး အသက်ရှူခက်ပြီး ဆေးရုံရောက်လာတဲ့ကလေး …
ခြောက်နေတဲ့ကော်စက လေပြွန်ထဲ ဝင်သွားပြီး အဆုတ်ရောင်ဖြစ် … လေပြွန်ထဲ မှန်ပြောင်းထည့်ပြီး ကော်ခြောက်အစအနတွေ ထုတ်ပစ်ရတဲ့ကလေး …အဲဒီလို ဇာတ်လမ်းတွေ မနည်းမနောပဲကိုး။
ဒါကြောင့် ကလေးငယ်ရှိတဲ့ မိဘတွေအနေနဲ့ ”Safety is first” ဖြစ်ပါတယ် … အန္တရာယ်ဟာဘာလဲ မသိသေးတဲ့ ကလေးငယ်တွေအတွက် ကာကွယ်ခြင်းက အကောင်းဆုံးကုသမှုဖြစ်တယ် … ဆိုတာလေး သတိချပ်စေချင်ပါတယ်။
ချစ်စရာရင်သွေးတို့ ဘေးကင်းကြပါစေ။ ။
အဈမရေ … အထူးအဆနျး Case တခု ရောကျလာပွနျပွီ။ ဟေ … ဘာမြားလဲ။
ကလေးက တနှဈကြျော။ လမျးလြှောကျခါစ။ အမကေ ထိနျးနရောက ခဏထပွီး ရသေောကျတာ။ အဲဒီအခြိနျ ဘေးနားက ဘီဒိုအံဆှဲထဲက Super glue ကို ဖှငျ့ပွီး ပါးစပျထဲထညျ့လို့။ ခကျြခငျြးဆှဲလိုကျပမေယျ့ မမီလိုကျဘူးတဲ့ ။ ခု ကွညျ့လိုကျတော့ … အာခေါငျမှာရယျ လြှာပျေါရယျ ခွောကျပွီးကပျနတေယျ။
အငျး … ဖွဈရမယျ။ ကဲ ကဲ … ခုခကျြခငျြး စာရှာဖတျကွဦး။ ဘယျလို Toxicity (အဆိပျသငျ့ခွငျး) ရနိုငျသလဲ။ ဘယျလို ကုသမှုပေးရမလဲ ဆိုတာ။
Super Glue မှာ Cyanoacrylates ဆိုတဲ့ ဓာတုပစ်စညျး အဓိက ပါဝငျပါတယျ။ ကပျအားအလှနျကောငျးတဲ့ ဓာတုပစ်စညျးမို့ မတျောတဆ သူနဲ့ထိမိတဲ့အခါ အရပွေားအခငျြးခငျြး ပူးကပျသှားတာ… ဦးရပွေားနဲ့ဆံပငျမှာ ထှေးကပျသှားတာ …
ပါးစပျထဲဝငျသှားတဲ့အခါ … မကျြစိထဲဝငျပွီး မကျြလုံးပိတျသှားတာ … မကျြစိမကျြကွညျလှာထိခိုကျပွီး အမွငျအာရုံကှယျသှားတာ … တှထေိ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ အမွနျခွောကျသှားတတျတဲ့ သဘာဝကွောငျ့ ပါးစပျထဲဝငျသှားခဲ့ရငျ မွိုခမြိတဲ့ထိဖွဈခဲပါတယျ။ ပါးစောငျ အာခေါငျ လြှာပျေါမှာ ခွောကျပွီး ကပျသှားနိုငျပါတယျ။
”First aid measure” Super Glue နဲ့ ကပျမိရငျ အရေးပျေါ ဘာလုပျပေးနိုငျလဲ။
မပွာပါနဲ့။ကပျနတေဲ့အရပွေားကို ဇှတျဆှဲမခှာပါနဲ့။ အရပွေား ထိခိုကျပှနျးပဲ့နိုငျပါတယျ။
ကပျနတေဲ့နရောကို ဟငျးသီးဟငျးရှကျဆီ (Vegetable oil) ရှဲရှဲလူးပေးထားပါ။ အဲဒါမရှိရငျ ဆပျပွာနဲ့ရနှေေးနှေးနဲ့ စိမျထားပါ။
အရပွေားကို ရှနေ့ောကျအသာအယာ ပှတျဆှဲလှိမျ့ပွီး အနားတှကေစပွီး ကပျနတေဲ့ကျောကို ငွငျငွငျသာသာခှာကွညျ့ပါ။
တခါနဲ့မရရငျ ဆီပွနျလူးပွီး ထပျခါထပျခါ ကွိုးစားကွညျ့ပါ။ ခြောမှတျတဲ့ပစ်စညျးတခုခု (ဥပမာ ခဲတံ, ဘီး) ကို ကပျနတေဲ့ကွားကထားပွီး အသာဆှဲဟကွညျ့ပါ။ ခှာလို့ရသှားပွီးရငျ ခွောကျသှအေ့ကျကှဲတာကာကှယျဖို့ အစိုဓာတျထိနျးတဲ့ ခရငျ တခုခုလိမျးပေးပါ။
ရဆှေတျထားတဲ့အဝတျ သို့ ပတျတီးနဲ့ အသာအုပျထားပွီး မကျြစိဆရာဝနျထံ သှားပါ။
တကယျလို့ ပွစရာမကျြစိဆရာဝနျမရှိရငျလညျး ပွာပွီး လုပျမိလုပျရာမလုပျပါနဲ့။ မြားသောအားဖွငျ့ ၁-၄ ရကျအတှငျး အလိုလို ပွနျပှငျ့လာပါလိမျ့မယျ။
Vegetable oil ဟငျးသီးဟငျးရှကျဆီ သို့ Body oil ကိုယျလိမျးဆီ တမြိုးမြိုး ရှဲရှဲလူးပေးပါ။ တရကျ နှဈရကျနရေငျ အလိုလိုကှာကသြှားပါမယျ။ သိပျလုံးထှေးနရေငျ ဆံပငျကို အသာလေး ရိတျပဈလို့ရပါတယျ။
ပါးစပျထဲကပျနတေဲ့ကျောကို ပါးစပျထဲကသှားရနေဲ့ပဲ စိုအောငျလုပျပွီး လြှာကပှတျတှနျးပေးပါ။ (ကလေးငယျတှကေတော့ မလုပျတတျလောကျဘူး။)
တရကျနှဈရကျနလေို့ ကှာလာတဲ့အခါ မွိုမခမြိဖို့ သတိထားရပါမယျ။ (ဒါလညျး ကလေးငယျတှအေဖို့ ခကျခဲမယျ။)
Super glue မကျြစိထဲဝငျပွီး မကျြကွညျလှာပေါကျပွီး မကျြစိကှယျသှားတဲ့ကလေး …
ပါးစပျအဝကပျသှားပွီး အသကျရှူခကျပွီး ဆေးရုံရောကျလာတဲ့ကလေး …
ခဈြစရာရငျသှေးတို့ ဘေးကငျးကွပါစေ။ ။
”ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ငလျင် နောက်ဆုံးရသတင်း” …..